नेपाल आज | ८० बर्षदेखि निलाहार छन् यी ९० वर्षीय बाबा! भन्छन्, ‘हजार बर्षसम्म म यसरी नै बाँच्छु’
८० बर्षदेखि निलाहार छन् यी ९० वर्षीय बाबा! भन्छन्, ‘हजार बर्षसम्म म यसरी नै बाँच्छु’
के कोही मानिस केहि नखाई ज्यूँदो रहन सक्छ ? त्यो पनि केहि दिन, केहि हप्ता, केहि महिना होइन होइन ८० बर्षसम्म। यति मात्र ह्योइन के योगले पाचन प्रक्रियालाई पनि रोक्न सक्छ ? सुन्दा अलि कस्तो कस्तो लग्न सक्छ तर यो साँचो हो। गुजरातका प्रल्हाद जानी यस्तै कुराको ठोकुवा गर्छन। ९० बर्षीय प्रल्हादले बिगत ८० वर्षदेखि न त केहि खाएका छन न त केहि पिएका नै। यहासम्म कि योगको शक्तिले उनि ८० बर्षदेखी ट्वाइलेट सम्म पनि गएका छैनन तथापी उनि अझैसम्मपनि स्वस्थ र जिवितै छन।
८० बर्षदेखी न केहि खाएका छन न केहि पिएका
गुजरातस्थित मेहसाणामा बस्ने प्रल्हाद जानी उर्फ माताजी चुनारीवाले बिज्ञानका लागि चुनौती बनेका छन। प्रल्हादका अनुसार उनले आध्यात्मिक जीवनका लागि १० बर्षको हुँदादेखि घर छोडेका थिए। एक बर्षसम्म उनि माता अम्बेको चरम भक्तिमा लिप्त भए जसपश्चात उनको भक्ति देखेर माता प्रसन्न भईन र उनलाई माताको असिम कृपा प्राप्त भयो त्यसै बेलादेखि उनलाई न त भोक लागेको छ न त प्यास नै। यति मात्र होइन माताको भक्ति गर्न थालेपछि उनि साडी, सिन्दुर, नाकमा नथि र महिलाले खै शृंगार गर्न थाले। जानकारीमा आएअनुसार प्रल्हाद जानी पछिल्लो ५० बर्षदेखि गुजरातको अहमदाबादबाट १८० किलोमिटर दुरीमा रहेको अम्बाजी मन्दिरको गुफामा बसेका छन।
वैज्ञानिकले समेत मानिसके हार
प्रल्हादको कुरालाई मध्यनजर गर्दै डाक्टर र वैज्ञानिकहरुले उनलाई निगरानीमा पनि राखिसकेका छन। केहि नखाई कोहि कसरि जीवित रहन सक्छ भन्ने पत्त्यर नलागेर उनको हर क्रियाकलापलै अवलोकन गर्न सिसिटिभी समेत जडान गरियो तर सिसिटिभी फुटेजमा पनि एक महिना बर्षदिनसम्म पनि उनले न त केहि खाएको, पिएको न त ट्वाइलेट गएको देखियो। जसलाई देखेर डाक्टरदेखि बैज्ञानिकसम्म पनि अचम्ममा परेका छन।
गम्भीर रोगको उपचारको दाबी
प्रल्हाद जानीले दावी गरेका छन कि उनि यसै गरि हजार वर्षसम्म पनि जिवितै रहन सक्नेछन। यसका साथै उनि एड्स, मधुमेहजस्ता गम्भीर रोगको उपचार गर्न सक्छु पनि भनिरहेका छन। यति मात्र होइन उनि निसंतान्लाई एक फल खान दिएर उनीहरुको उपचार समेत गर्छन। उनले यसअघि पनि हजारौं मानिसको उपचार गराईसकेको उनका भक्तहरु बताउछन।